मेरो धर्म कुन हो ? | We Nepali
नेपालको समय: ०७:०० | UK Time: 02:15
२०७८ भदौ ३० गते १३:४९
बार्टु क्याभ मलेसियामा लेखक
धर्मको परिभाषालाई एकछिन थाँती राखेर बरु बेलायती सैनिकमा भर्ती भएर हङकङमा पुगेको क्षण उजागर गर्न चाहन्छु । हङकङमा पुगेको केही वर्षपछि एकदिन पाइ ताउ गाउँ, सातिनमा पुगेको थिएँ । जहाँ सन् १९५१ मा बुद्धको एउटा ठूलो विहार निर्माण भएको थियो । जुन विहारको नाम दश हजार (टेन थाउजेन्ड) बुद्ध भनेर राखिएको छ । तर त्यस विहारको नाम १० हजार भएतापनि त्यहाँ १३ हजार बुद्धका प्रतिमाहरु रहेको भन्ने सुनिन्छ । आखिर त्यहाँ पुगेर बुद्धका त्यति धेरै प्रतिमाहरु गनेर चाल पाउने समय सायदै कस्लाई पो मिल्न सक्ला र ? तैपनि १३ हजार प्रतिमा राखेर त्यसको नाम चाहिँ दश हजार भनेर किन राखिएको होला भनेर म मनमनै छक्क पर्ने गर्दथेँ । तिनै प्रतिमाहरुलाई हेरेर मलाई भगवानको नाममा एउटा काम र फरक नतिजा भएपनि समस्या नपर्ने रहेछ भन्दापनि बुद्धको महानवाणी “दिमाग सबै चिज हो, के सोच्यो त्यस्तै हुन्छ” भन्ने सोच्दैसोच्दै नेपाल पुगेर पहिलो चोटी लुम्बिनी पुग्ने अवसर मिलेको थियो । तर भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दोश्रो चोटीको यात्रा पर्खन मलाई अर्को साढे दुई दशक पर्खनु परेको तीतो याद अहिले पनि झल्झली सम्झन्छु ।
समयले हुरीले डोर्याएर इसापूर्व छैटौं शताब्दीको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा उत्तर प्रदेशमा अवस्थित तिनै मथुरा भन्ने ठाउँमा सायद भगवान कृष्णको जन्म भएको हुनसक्छ भन्ने कथा अहिलेसम्म पनि सुन्न सकिन्छ । तर वास्तविक यथार्थ चाहिँ तिनै भगवान कृष्ण र उनका शिष्यहरुलाई मात्र थाहा होला ? हुनत जस्तोसुकै कथा पनि आखिर कथा नै त हो, मुख्य कुरो कस्ले लेख्छ त्यसमा नै निर्भर हुने गर्दछ ।
परम प्रभु परमेश्वरको जन्म स्थान पुगेर केही हर्षित भएतापनि तिनै भगवानसँग सम्बन्धित कुनैकुनै विषयमा चाहिँ मलाई एउटा रमाइलो कथा जस्तै लागिरहेको थियो । हुनत एउटा रुखलाई हेर्ने क्रममा मैले र अरुले फरकफरक दृश्य देख्न सक्छौँ । वास्तवमा राम्ररी सोच्ने हो भने यस धर्तीमा भएका लगभग २ अर्ब मानिसहरुको आस्थाको केन्द्रलाई मैले किन विश्वास नगरेर फरक प्रकारले सोच्ने भन्ने प्रश्न उठ्न पनि स्वभाविकै हो । तर पहिले पृथ्वीलाई सूर्यले परिक्रमा गर्छ भन्ने मानिसहरुको संख्या पनि २ अर्बभन्दा अझ बढी नै थियो । अन्ततः पोलिस वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकोसले सूर्यकेन्द्रित प्रणाली बनाउँदा उनको सिद्धान्तलाई क्याथोलिक चर्चले प्रतिवन्धसम्म लगाएको थियो । चर्चको त्यस्तो अनपेक्षित कार्यले धर्म र विज्ञानमा पहिलो पटक विवादको सिर्जना गरेको थियो । वास्तवमा भौतिकशास्त्रमा मात्र कुनै कामको प्रमाण प्रस्तुत गर्न पर्दैन भन्ने सुनेको थिएँ । तर बेत्लेहम पुगेपछि धार्मिक ग्रन्थमा पनि प्रमाण पेस गर्न जरुरी छैन रहेछ कि भन्ने मेरो मनमा लागिरह्यो ।
पानाथेनिक रङ्गशालाबाट बिदा लिएपछी मनभरी एथेना देवीलाई सम्झँदै आक्रापोलिस डाँडा चढ्न निस्कदै थिएँ । तर आक्रापोलिस जाँदै गर्दा बाटोमा पर्ने ‘टेम्पल अफ ओलम्पियन जेयस’ एथेन्समा केहीबेर रोकिन पुगें । उक्त मन्दिर इसापूर्व छैटौं शताब्दीबाट निर्माण सुरु गरिएको भएतापनि त्यसको लगभग ६ सय ३८ वर्षपछि रोमन साम्राज्य हेड्रियनले पूरा गरेका हुन् । जेयस मन्दिर पूर्णावस्थामा पुग्दा एथेन्समा १०४ वटा कोरिन्थियन खम्बाहरु थिए । जस्तो कि यहाँहरुलाई अवगत भएकै हुनुपर्छ, प्राचिन समयमा ग्रीकहरुले ठूल्ठूलो मन्दिर र महलहरु बनाउन डोरिक, आयोनिक र कोरिन्थियन ३ प्रकारको खम्बाहरु प्रयोगमा ल्याएका थिए । अहिले पनि विश्वको प्रमुख सहरहरुमा तिनै ग्रीक खम्बाहरुको प्रयोग भएको राम्ररी देख्न सकिन्छ । लगभग २ हजार वर्ष पहिले बनेर भग्नावशेष भइसकेका १५ वटा कोरिन्थियन खम्बाहरु अहिलेसम्म बाचौं कि मरौं भन्दै उँभो आकाशतिर फर्किरहेका छन् र दुई वटा चाहिँ भुईमा बङ्लङ्गै लडिरहेका नजर लगाउन मिल्दछ ।
अन्ततः विश्वको आधाभन्दा बढी राष्ट्रहरुले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अङ्गीकार गरिसकेका छन् । नेपालको हकमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हावापानी र माटोसँग एकदम सुहाउँदिलो छ । अझ मैले यहाँ कसैको डर नमानी दिल खोलेर भन्नै पर्छ । “मन्दिर जानु र भट्टि पसल जानु भनेका एउटै हुन्, किनभने ती दुवै ठाउँहरुमा क्षणिक आनन्द मात्र मिल्न सक्छ । सबैभन्दा बढी आनन्द प्राप्तिको लागि त अध्ययन एवम् अनुभव नै गर्नुपर्छ । त्यसपछि के चाल पाउन सकिन्छ भने न यहाँ अलौकिक शक्ति भएको कुनै भगवान नै छ वा पहिले थियो वा भविश्यमा नै हुन्छ ।”